शीर्षकमा बाइबल पदहरू: नरक -> जीवन
सबै दुष्‍टहरू र परमेश्‍वर नमान्‍नेहरूका अन्‍त्‍य मृत्‍यु हो।
२ थिस्सलोनिकी १:९
तिनीहरूको सजायचाहिँ तिनीहरू प्रभुको शक्तिशाली उज्‍यालो र संगतिबाट निकालिनेछन् अनि सधैँभरिका लागि नाश गरिनेछन्।
आगोको भट्टीमा हालिदिनेछन्। त्‍यहाँ तिनीहरू दाह्रा किट्दै रुवाबासी गरिरहनेछन्।”
किनभने तपाईंले मलाई पातालमा छोड्‍नुहुन्‍न, तपाईंले आफ्‍नो पवित्र जनलाई मरेको मरेकै र कुहिएर नाश हुन दिनुहुन्‍न।
यदि तिम्रो हातले तिमीलाई पापमा पार्छ भने यसलाई काटेर फालिदेओ। दुवै हात लिएर नरकको कहिल्‍यै ननिभ्‍ने आगोमा पर्नुभन्दा त बरु एउटा हात नभई अजम्‍मरी जीवन पाउनु बेस हो।
त्‍यसै गरी सदोम र गमोरा अनि वरिपरिका सहरका मानिसहरूले एकपछि अर्को गर्दै घिनलाग्‍दा व्‍यभिचारका काम गर्न लागे। आगोमा नाश पारिएर तिनीहरू कहिल्‍यै ननिभ्‍ने आगोको दण्‍ड पाउनेहरूका नमुना भए।
बुद्धिमान् मानिसहरूले जीवनमा पुर्‍याउने उकालो बाटो लिंदछन्, मृत्‍युमा पुर्‍याउने ओह्रालो बाटो होइन।
वास्‍तवमा त्‍यस्‍तो अनुशासनले तिनीहरूको प्राणको रक्षा गर्छ।
आगोको भट्टीमा हालिदिनेछन्। त्‍यहाँ तिनीहरूले दाह्रा किट्दै रुवाबासी गर्नेछन्।
“त्‍यसपछि उनले आफ्‍ना देब्रे हातपट्टि भएकाहरूलाई भन्‍नेछन्, ‘ए परमेश्‍वरको सराप परेका मानिसहरू हो, यहाँबाट गइहाल! शैतान र उसका दूतहरूलाई तयार पारिराखेको कहिल्‍यै ननिभ्‍ने आगोमा जाओ!
मृत्‍यु-लोकले पनि त्‍यहाँका कुरा परमप्रभुदेखि लुकाउन सक्‍दैन, त कसरी एउटा मानिसले उहाँदेखि आफ्‍ना सोचविचार लुकाउन सक्‍छ?
स्‍वर्गको राज्‍य खोल्‍ने साँचाहरू म तिम्रो हातमा दिनेछु। जे तिमीले यस पृथ्‍वीमा बाँध्‍नेछौ, त्‍यो स्‍वर्गमा पनि बाँधिनेछ अनि जे तिमीले यस पृथ्‍वीमा फुकाउँछौ, त्‍यो स्‍वर्गमा पनि फुकाइनेछ।”
२ पत्रुस २:४
परमेश्‍वरले पाप गर्ने स्‍वर्गदूतहरूलाई समेत बाँकी राख्‍नुभएन, तर तिनीहरूलाई नरकमा फाल्‍नुभयो। त्‍यहाँ तिनीहरू अन्‍धकारमा बाँधिएर ठूलो न्‍यायको दिनसम्‍मलाई राखिएका छन्।
 समुद्रले त्‍यसका मुर्दाहरू सुम्‍पिदियो, मृत्‍यु र पातालले आफूसँग राखेका मुर्दाहरूलाई सुम्‍पिदिए र सबैको आ-आफूले गरेका कामअनुसार न्‍याय भयो। यसपछि मृत्‍यु र पाताल पनि अग्‍नि-कुण्‍डमा फ्‍याँकिए (यो अग्‍नि-कुण्‍ड दोस्रो मरण हो)।
मानिसहरूले त तिम्रो शरीरलाई मात्र मार्न सक्‍छन्, तिमीहरूको आत्‍मालाई चाहिँ तिनीहरूले बिगार गर्न सक्‍दैनन् नि! यसैले आत्‍मालाई मार्न नसक्‍नेहरूदेखि नडराउनू, बरु तिम्रो आत्‍मा र शरीर दुवैलाई नरकमा नाश गर्न सक्‍नुहुने परमेश्‍वरदेखि नै डराउनू।
जसले पाप गर्छ, त्‍यही मर्छ। बुबाका पापले गर्दा छोरोले कष्‍ट भोग्‍नेछैन न त छोरोको पापले बुबालाई पिराउँछ, भलो मानिसलाई उसको भलाइले नै असल इनाम दिन्‍छ र दुष्‍ट मानिसलाई त्‍यसको खराबीले नै पिराउँछ।